किसानका आँखामा गहभरी आँशु कसरी ऋण तिर्ने ? कसरी परिवार पाल्ने ? – News Nepali Dainik
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक ०३, २०७८ समय: १८:०५:१४
जनकपुरधाम । धनुषाको कमला नगरपालिका वडा नम्बर ४ मुकेशकुमार यादव गाउँमा सरसापट गरी डेढ बिघा जग्गामा जिरी जातको धान लगाए । समयमै बर्षा भएका कारण राम्रै फल्यो । ऋण तिर्न र परिवारका निम्ति अन्न जोहो भयो भनेर उनी खुशी भए । एक साता अघि उनले काट्न शुरु गरे ।
तर सोमबार रातिदेखि परेको पानीले पाकिसकेको उनको धान डुबानमा परेको छ । ‘डेढ बिघा खेतकै धान भित्र्याउन मात्रै बाँकी थियो । मेरो मिहिनेत, लगानी सबै बर्बाद भयो’ उनी भन्छन्, कसरी ऋण तिर्ने, अनि परिवारलाई कसरी पाल्ने ?’
उनका अनुसार खेती गर्ने समयमा मजदुरको ज्याला र मलखाद्यका लागि ५० हजार ऋण लिएका थिए । ‘प्रत्येक बर्ष यस्तो ऋण लिएर खेती गर्दै आएको छु,’ उनी भन्छन्, ‘उब्जेको धान बेचेरै ऋण चुक्ता गर्ने र परिवारलाई पाल्दै आएको हो । यस पटक अब न ऋण तिर्न सकिन्छ, न त परिवारलाई नै पाल्न सकिन्छ ।’
मुकेश जस्तै पीडामा छन्, मालबर मण्डल । ९५ बर्षका मण्डलले १५ कठ्ठा जग्गामा धानबाली लगाएका थिए । पाकिसकेको धानबालीलाई घर भित्र्याउन बाँकी थियो । काटेर खेतमा राखेको धान बेमौसममा परेको पानीले डुबाएको छ । ‘शुरुदेखि खेती गरेरै परिवार पाल्दै आएको छु, अब कसरी छाँक टार्ने ?’ गहभरी आँसु पार्दै उनले भने ।
मण्डलका एक श्रीमती र एक छोरी छन् । भन्छन्, ‘सबै बर्बाद भयो, यसपाली पेट पाल्नै समस्या हुन्छ ।’
मुकेश र मालबरजस्तै धेरै किसानलाई पानीले पीडा दिएको छ । लगातारको भरीका कारण खेलमा पानी जमेको छ । डुवानमा परेको धानलाई उठाएर आलीमा राख्ने प्रयास गरिएको छ । तर डुबेको धान सड्ने सम्भावना धेरै भएको मुकेश बताउँछन् ।
Last Updated on: October 20th, 2021 at 6:05 pm